Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kupemberera China
Tarisiro yeVáclav Čtvrtek
Ruzhinji (464 m asl) igomo muruwa rwe Ji'an Kráhradhradecká kraj, muCzech Republic. Inoreva nhema pamusoro pe4 km kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweJain. Gomo iri panzvimbo dzepamusoro yeguta rePurchov uye musha weHolin. Ndiyo nzvimbo yakakwirira yePrachov Hills.
Kune kutarisa kwakajeka kweChitatu chechina pamusoro peMuzambiringa, uko kune maonero kumaodzanyemba, kuVeli, Zebin, Ji'an uye Ji'an Basin. Munharaunda yekumabvazuva unogona kuona Brada Hill uye kumavirira Dusty.
Kumadokero kuseri kwechigaro padyo padyo nePrachov Přivýšina inobatana negomo rakapetika Svinčice (451 m asl) uye Prachovské skály, kumabvazuva iko kunogarisana nechikomo cheBrada (439 m asl). Izvi zvinhu zvinoumba Přivýšina ridge (inozivikanwawo se Prachov ridge), yakatambanudza seRecýšina pachezasi munzira yakatarisana nemadokero-kumabvazuva.
Gomo racho nderimwe rose rinonzi JiÄnska pahorkatina, pasi peTokovska pahorkatina yose, ruwa rweVyskovska vrchovina, makomo e Prachovska pahorkatina uye chikamu chePolish het.
Inowanikwa netsoka pane yebhuruu yevashanyi chiratidzo Jičín - Brada - Prachov,…